SAWIRRO:-Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Afrika oo maanta dalka ka ambabaxay | Warbaahinta Umada Soomaaliyeed	Sunday, April 23rd, 2017	Home
SAWIRRO:-Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Afrika oo maanta dalka ka ambabaxay
Apr 18, 2017 - jawaab	Waxaa maanta ka dhoofay guddoomiyaha xiriirka kubbadda cagta qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo CAF Mr Ahmed Ahmed, oo shalay dalka ku yimid booqasho rasmi ah oo laba maalmood ah.
Wasiir ku-xigeenka Dhallinyarada iyo Cayaaraha ee Xukuumadda Soomaaliya Axmed Cumar Islow Xildhibaanno, mas’uuliyiinta xiriirkada kala duwan ee cayaaraha ayaa maanta sagootiyay Wafdiga uu hogaaminayay Madaxweynaha Xiriirka kubadda Cagta ee Qaaradda Afrika Axmed Axmed, waxaana uu kulamo kala duwan la qaatay mudadii booqashadiisa Madaxda sare ee dowadda.
“Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Qaaradda Afrika, runtii 16-kii bishii hore ayaa la doortay, waxaana uu ballan qaaday in safarkiisa ugu horeeya uu ku imaanayo Muqdisho, runtiina waa uu ka dhabeeyay, haddana waxaan ka sagootinayeynaa garoonka diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cadde” sidaasi waxaa yiri Wasiir ku-xigeenka Dhallinyarada iyo Cayaaraha.
Madaxweynaha kubbadda cagta Qaaradda Afrika wuxuu kormeeray mudadii booqashadiisa garoomada kubada cagta ee Jaamacadaha, Kan Muqdisho Stadium oo fariisin u ah ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM iyo garoonka Benaadir.
Axmed Axmedoo u dhashay Madagascar ayaa la doortay 16-kii bishii hore, waxanna uu helay codad gaaraayo 34 halka Ciisa Xayaatu oo kaga horeeyay xilkaan la tartamayay uu helay codad dhan 20.